Ny fampidinana ny vidin'ny rojom-bidy amin'ny indostrian'ny Aerospace sy ny fiarovana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny fampidinana ny vidin'ny rojom-bidy amin'ny indostrian'ny Aerospace sy ny fiarovana
Hostpost • Serivisy fampandrenesana tariby
Ny rojom-panomezana Aerospace and Defense (A&D) dia miatrika vanim-potoana sarotra indrindra.
Ny valanaretina COVID-19 dia nampandohalika ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, namela ny mpamokatra sy ny mpamatsy hiady hiverina amin'ny haavon'ny famokarana mahazatra.
Ny governemanta, ho setrin'ny toe-karena mandringa, dia nampidina ny fandaniany ny A&D amin'ny fitaovan'ny miaramila.
Ny orinasa tsy miankina, amin'ny hetsika sahala amin'izany, dia nampihena ny fandaniana amin'ny fitaovana aerospace.
Ity fironana ity dia namela orinasa maro izay tsy manana fitokisana mpiara-miasa amin'ny famatsiana Aerospace mihozongozona. Saingy tsy ny rojom-pivarotana A&D ihany no mijaly. Ny fitantanan-draharahan'ny Biden dia nanao izao tombana 100 andro ny rojo famatsiana mitsikera. Ny valiny dia naneho fahalemena isan-karazany amin'ny indostrian'ny famarotana.
Etazonia dia nidina tamin'ny 37 isan-jaton'ny famokarana semiconductor manerantany ho 12 isan-jato tao anatin'ny 20 taona lasa. Etazonia dia tsy mamokatra afa-tsy 6 ka hatramin'ny 9 isan-jaton'ny chips lozika matotra kokoa, haitao mandroso semiconductor. Raha ny filazan'ny filoham-pirenena, ity isan-jato ambany ity dia "mandrahona ny faritra rehetra amin'ny rojom-pitaterana semikonductor ary koa ny fifaninanana ara-toekarena maharitra."
Ny fidinan'ny vidim-piainana dia nahatonga ny fitantanan-draharaha Biden nanambara ny “herin'ny fikomiana”, notarihan'ny solontenan'ny varotra amerikana Katherine Tai, izay “hanome tolo-kevitra amin'ny fampiharana iraisan-dàlana sy amin'ny lafiny maro manohitra ny fomba fanao tsy ara-drariny izay namongotra ireo rojom-bidy goavambe.”
Satria samy mifantoka amin'ny fomba mahomby amin'ny famatsiam-bola ny filan'ny aérospace ny mpandray anjara amin'ny governemanta sy ny mpiray tsikombakomba, ny orinasa mpamokatra A&D dia mila mampihena ny vidiny mba hahazoana fifampiraharahana sy hitazonana ny vola miditra.
Ireto misy dingana vitsivitsy hanampiana ny kely sy ny antonony fiaramanidina ny mpamokatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny rojom-bidy amin'ny vidiny ambany:
1. Alao ny rojo famatsiana
Ny maodelim-pamokarana kilasika mahazatra dia mandeha amin'ny laoniny, ary ny mpanao politika mazàna dia manana fomba fijery tery momba ny rojom-panolorana ankapobeny, mitarika amin'ny lesoka mety hitranga sy ny fampitomboana ny fandaniana.
Ny rojom-panomezana nomerika kosa dia manome fomba fijery feno momba ny rojom-panomezana mba ahazoana mazava kokoa, fiaraha-miasa, fahafaha-manao ary valiny haingana. Raha tsorina, ny nomerika dia mampiasa angon-drakitra handefasana ireo rojom-bidy.
Ny fampidirana ny angon-drakitra mandritra ny rojom-panomezana iray manontolo dia manampy amin'ny fanatsarana ny rojom-panomezana amin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny famaritana ny toerana farany hitrangan'ny famatsiana miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny olombelona voafetra.
Ohatra, ny rindranasa fakana tahiry, ny rafitra fanaraha-maso, ny famokarana mailaka, ny faharanitan-tsaina artifisialy ary ny milina mifehy tena dia azo ampidirina ao anaty rafitry ny famatsiana ho an'ny rafitra haingana sy malefaka kokoa.
Mba hahatratrarana ny nomerika ny rojom-pamokaranao dia mety mila mila mpiara-miasa amin'ny orinasa fitantanana rojom-pamokarana manerantany ianao. Misy safidy maromaro any Etazonia. Ity torolàlana ity dia mitanisa ireo orinasa fitantanana rojom-bary tsara indrindra eran-tany izay miasa amin'ny sehatry ny aérospace sy fiarovana.
2. Ampiasao ny fitaovana fandaniana
Ny fahafantarana ny fandaniana sy ny tahan'ny mpamatsy dia manampy ny mpanamboatra Aerospace sy Defense hahazo vidiny mirindra amin'ny baikony. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mihevitra fa raikitra ny vidin'ny mpamatsy. Na izany aza, ny vidiny sasany dia azo ovaina raha manana fampahalalana marina ny mpanamboatra. Ny famakafakana fandaniana stratejika no lalana tokony haleha.
Araka ny US Fitsipika fividianana federaly (FAR) 15.407-4, ny famakafakana fandaniana stratejika dia tokony hanombatombana “ny toekarena sy ny fahombiazan'ny mpiasa miasa, ny fomba, ny fitaovana, ny fitaovana, ny fananana, ny rafitra miasa ary ny fitantanana.”
Manolotra modely roa izahay amin'ny famaritana rafitra iray momba ny vidiny mirary:
Modely mendrika: Amin'ity modely ity dia mampiasa ny vidin'ny tsena ara-barotra sy ny toekarena ny mpandraharaha hamaritana ny sandan'ny tsena ara-barotra amin'ny vokatra. Ity maodely ity dia tsy mihevitra ireo mpamatsy manontany ny vidiny fa kosa mahita hoe inona no tokony ho vidin'ny vokatra miorina amin'ny lafin-javatra toy ny akora, ny vidiny ambony, ny asa ary ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Famakafakana mandatsa-dranomaso: Ny famakafakana mandatsa-dranomaso dia manaparitaka ny vokatra iray amin'ireo mpiorina kely kokoa hamaritana ny vidin'ny pragmatika na ny sandan'ny isam-batan'olona araka ny asany. Ankoatry ny famolavolana indostrialy, ity fitaovana ity dia manombana ny fahaizany, ny hamafiny, ny famokarany, ny fahatokisana azy, ny filaminana, ary ireo fiasa hafa azo ampiharina.
Mianara bebe kokoa momba ny fampiasana fitaovana lafo vidy ao amin'ity lahatsoratra ity.
3. Checklists sy fitaovana
Ny fikambanana dia tokony hamokatra lisitra lisitra maodely sy fitaovana hampiasain'ny talen-tsekoly alohan'ny hanaovany ihany koa. Ny lisitra fanamarinana toy izany dia hamelabelatra ireo soso-kevitra toy ny hoe misy mpanamboatra manana singa tia teti-bola nefa afaka manao io asa io ihany.
Ireo fitaovana dia mety ho sary sy takelaka manampy ny talen-tsambo hamorona haingam-pandeha haingana, hampifanaraka ny vidin'ny mpiorina sy ny mpivarotra hafa, ary handinika ny fironan'ny tsena.
Ny mpitantana dia tokony hanana fomba fijery mazava momba ny filàna na inona na inona angatahan'ny mpamatsy vola fatra ambany indrindra. Ny tanjona dia tokony tsy ny hisorohana ny famitana singa fotsiny fa ny hampihenana ny lisitra.
4. Mifampiraharaha amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny mpamatsy
maro Aerospace sy fiarovana mino ny orinasa fa tsy manana leverage ampy handresena lahatra ny mpivarotra hampihena ny vidiny, indrindra ireo mpivarotra lalim-paka mifamatotra amin'ny programa lehibe.
Ireo orinasa ireo dia mamela ny lalao alohan'ny hanombohany akory. Na dia tsy mandeha amin'ny valan-javaboary aza ny fifampiraharahana dia misy fomba vitsivitsy azon'ny orinasa Aerospace sy Defense ampiasaina hanatsarana ny vidiny.
Fantaro ny vidin'ny lasibatra azo arovana
Ny ankamaroan'ny mpamokatra mazàna dia tsy manana fironana firy momba ny toekarena ara-toekarena ho an'ny singa iray avy amin'ny mpamatsy iray nomena. Vokatr'izany, ny dingana voalohany dia ny famoahana sanda kendrena marina mifanaraka amin'ny vidin'ny mpifidy. Ny orinasa dia afaka mampihatra fomba maro hanatanterahana izany.
Ny orinasa dia mijery ny fandehanan'ny vidin'ny mpamatsy vola amin'ny volavolan-dalàna voafantina iray amin'ny fihenan'ny farany ambany. Ho an'ny fitaovana tena be pitsiny, ny vokatra vita voalohany amin'ny tsipika fivoriambe dia mitaky be lavitra noho ny zato, izay kosa lafo lavitra noho ny arivo.
Ny tahan'ny fihenan'ny vidin'ny rafitra dia fifandraisana manara-penitra eo amin'ny habetsaky ny famokarana ampitomboina amin'ny orinasa sy ny vidin'ny famokarana. Raha jerena ny isan'ny singa, ny karazana fivoriambe takiana, ary ny vidiny fanombohana voalohany, ny fihenan'ny vidiny dia mampiseho izay tokony hotakian'ny mpivarotra ambony indrindra aorian'ny habetsany voafaritra.
Misy fomba isan-karazany farany ambany hamaritana ny vidin'ny lasibatra. Ny fomba firafitry ny vokatra dia mitaky ny fijerena ireo sombin-taribin'ny milina iray nomena. Matetika misy eny amin'ny tsena malalaka ireo, ary ny orinasa dia afaka mamaritra ny sandany sahaza azy tsirairay avy, miaraka amin'ny vidin'ny asa mba hampifanarahana azy ireo.
Ny orinasa dia afaka mijery ny vidin'ny mpiorina mitovy aminy miaraka amina endri-javatra mifandraika amin'izany. Tsy misy amin'ireto fomba fiasa ireto no porofo tsy misy dikany, fa amin'ny alàlan'ny fampiasana azy rehetra, ny orinasa dia afaka mamorona elanelam-potoana ho an'ny vidin'ny lasibatra marina amin'ny singa voafaritra. Izany dia manome azy ireo antony azo itokisana sy azo refesina amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpamatsy mba hampihenana ny vidiny.
Mamolavola teboka leverage amin'ny mpamatsy
Fomba iray hafa ahafahana mifampiraharaha am-pahombiazana kokoa amin'ireo mpamatsy ny fahitana ny faritra azo atao amin'ny fampiasana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny orinasa dia afaka mahazo tombony betsaka kokoa noho izay heverin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana angona azo alaina amin'ny faritra sasany. Voalohany, na izany aza, ny mpamokatra Fitaovana Original (OEM) dia mila mahatakatra ny fomba ahitan'ny mpamatsy vola ny tombony sy ny fomba itomboan'ny karama mandritra ny fotoana iray.
Ohatra, ny mpamatsy sasany dia manao ny ankamaroan'ny volany amidy amin'ny OEM ho anisan'ny fifanarahana tany am-boalohany ho an'ny rafitra. Ny sasany mahavita bebe kokoa amin'ny fivarotana mivantana amin'ny governemanta na manerantany na amin'ny governemantany.
Mbola ny sasany kosa dia manasongadina ny vokatry ny fivarotana kojakoja ho an'ny milina izay miha lany andro. Amin'ny alàlan'ny fakana ny drafitry ny orinasa mpamatsy, ny orinasa dia afaka mamaritra ny fomba tsara hifandraisana amin'ny mpamatsy mba hananganana tombony mandritra ny fifampiraharahana.
Sebastian Samuel hoy:
Oktobra 6, 2021 ao amin'ny 10: 25
Ohatra, ny mpamatsy sasany dia manao ny ankamaroan'ny volany amidy amin'ny OEM ho anisan'ny fifanarahana tany am-boalohany ho an'ny rafitra. Ny hafa kosa mahazo tombony bebe kokoa amin'ny fivarotana mivantana amin'ireo governemanta na manerantany na amin'ny governemantany. Misaotra tamin'ity fizarana vaovao ity.